एलजीको नयाँ वर्षमा खुसिको अपग्रेड अफर, के किन्दा के फ्री ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एलजीको नयाँ वर्षमा खुसिको अपग्रेड अफर, के किन्दा के फ्री ?
एलजीको नयाँ वर्षमा खुसिको अपग्रेड अफर, के किन्दा के फ्री ?
चैत २० गते, २०७५ - १३:४२
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७६ लाई लक्षित गरि एलजीले विशेष नयाँ वर्ष छुट योजना बजारमा ल्याएको छ ।
खुशिको अपग्रेड नामक यस योजना मार्फत एलजीका टेलिभिजन तथा साउन्ड सिस्टमको खरिदमा ४३ प्रतिशत सम्मको क्यास ब्याक पाउन सकिनेछ ।
साथै एलजीका टेलिभिनजहरुमा २ वर्षको वारेन्टी समेत रहेको छ ।
एलजीले सिंगल डोर रेफ्रिजेरेटरको खरिदमा २० प्रतिशतसम्मको क्यास व्याक, डबल डोरमा मिक्चर, साईड वाई साईड रेफ्रिजेरेटरमा भ्याकुम क्लिनर, एसीमा फ्रि जडान र माईक्रो वेभ ओभनको खरिदमा कुकिङ किट पाइनेछ । एलजीका अन्य सामानको खरिदमा पनि आकर्षक अफरहरु रहेका छन् ।
यो योजना नेपालभरि चैत्र २० गते देखि सिमित अवधिको लागि मात्र लागू गरिएको छ ।
चैत २० गते, २०७५ - १३:४२ मा प्रकाशित